Zimkhalele obezishutha ekhothwa yinja 'enkomeni' | News24
Zimkhalele obezishutha ekhothwa yinja 'enkomeni'
Florida - Zimkhalele owesifazane obezishutha enza ucansi nenja yakhe ekamelweni.
Amaphoyisa athole izithombe eziveza owesifazane ekhothwa yinja ‘enkomeni’ ngesikhathi eqhuba uphenyo lwawo ngelinye icala athinteka kulona lo msolwa, kubika iSmoking Gun.
U-Ashley Miller,18, waseFlorida eMelika, uthweswe icala lokwenza ucansi nenja yakhe.
Funda nalolu daba: Indoda yenze ucansi nenja iziphindiselela kumkhayo
Umbiko uthi uMiller uvumile ukuthi wayebizela inja yakhe, u-2 face, ekamelweni ukuze izomkhotha ‘inkomo’.
Ngokusho kombiko, uMiller uthi lokhu kwenzeka izikhawu ezingu-30 kuya kwezingu-40.
Udedelwe ngebheyili ka-R12 000.